Manbij oo ay isku haystaan ciidamada ka dhanka ah kooxda dowladda Islaamka - BBC News Somali
Manbij oo ay isku haystaan ciidamada ka dhanka ah kooxda dowladda Islaamka
5 Maarso 2017
Image caption Manbij ayaa waxaa ku hardamaya Turkiga, Kurdiyiinta YPG, iyo kooxda dowladda Islaamka.
Isbahaysiga uu Mareykanka hormuudka ka yahay ee dagaalka kula jira kooxda dowladda Islaamka ayaa dhaqdhaqaaqiisu ku sii badanayaa gudaha iyo agagaarka magaalada Manbij ee dalka Suuriya.
Magaaladaasi ayaa hadda waxa ay qarka u saarantahay in ay weerar ku soo qaadaan koox fallaago ah oo uu Turkiga taageero.
Manbij ayaa noqotay magaalo ay isha ku wada hayaan xoogag iska soo horjeeda oo dhammaantood ka wada hawlgala woqooyiga dalka Suuriya.
Baraha intarneedka ayaa waxaa indhawaale dhex wareegayay sawirro muujinaya gawaarida gaashaaman ee xulufadan oo ku sugan meel u dhow magaalada Manbij, waxa ayna arrintaasi sii xoojisay warar sheegayay in Mareykanka uu doonayo in uu aad ugu lug yeesho magaaladan oo noqotay goob colaadeed oo haddaba ciriiri ah.
Afhayeen u hadlay xulufadani uu Mareykanka hoggaamiyo ayaa hadda waxaa uu xaqiijiyay in ciidamo badan halkaasi la geeyay.
Waxa uuna intaasi ku daray in ujeedadu ay tahay sidii looga hortagi lahaa falal colaadeed oo halkaasi ka dhaca iyo in diiradda la saaro kooxda dowladda Islaamka.
Manbij ayaa sanadkii la soo dhaafay waxaa kooxadan dowladda Islaamka ka qabsaday fallaago uu Mareykanka horkacayay, waxa ayna arrintaasi ahayd guul muhiim ah.
Basle waxaa xaaladda sii murjiyay xaqiiqada ah in fallaagadaasi ay hormuud u ahaayeen dagaalyahanno kurdiyiin ah.
Image caption Ciidamada ka dhanka ah Daacish
Turkiga ayaa isna dhankiisa waxa uu hoggaaminayay dagaal saf-ballaaran ah oo ka socda aagaasi oo aan ku koobnayn kooxda dowladda Islaamka oo kaliya balse sidoo kale looga soo horjeedo kurdiyiinta.
Waxa ayna ku amreen Kurdiyiintu in ay isugu gurtaan dhanka kale ee daanta bari ee wabiga Al-Furaat, basle arrintaasi ma aysan dhicin, waxaana xukuumadda Ankara ay ku hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto Manbij, haddii Kurdiyiintu ay ka dhaga adkeystaan amarkaasi.
Fallaagada ku sugan magaaladaasi ayaa u muuqda in ay heshiisyo la galayaan Ruushka iyo xitaa ciidamada dowladda, si weerarkaa loo hor istaago. Waxaana xitaa suurtagal ah in maamulka magaaladaasi ay ku wareejiyaan ciidamada dowladda madaxweyne Asad.
Mareykanka oo xoojinaya dhaqdhaqaaqyada uu ka wado deegaankani ayaa laga yaabaa in uu isna isbahaysi dani-kugu-qabatay ah uu la galo Ruushka iyo dowladda Suuriya, si looga hortago colaad dhex marta kooxaha fallaagada ah, arrintaa oo hakin karto hawlgalka qorsheysan ee la doonayo in lagu qabsado gacan ku haynta magaalada Raqqa oo ah xarunta kooxda dowladda Islaamka.